ချယ်လ်ဆီးမှာပဲ ကစားသမားဘ၀ကုန်ဆုံးဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဟာဇက် Hazard
19 Oct 2018 . 5:37 PM
လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့ ဟာဇက် Hazard နဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းတို့ရဲ့အသင်းတွေဟာ အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာလည်း ဟာဇက်ကို ခေါ်ယူဖို့အသည်းအသန်ဖြစ်နေသလို ဟာဇက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရီးယဲလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ချင်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ ဟာဇက်က ချယ်လ်ဆီးပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်စေမယ့် စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဟာဇက်က ချယ်လ်ဆီးမှာပဲ ကစားသမားဘ၀ကုန်ဆုံးဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟာဇက် က “ချယ်လ်ဆီးမှာကစားသမားဘဝ ပြီးဆုံးဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဘာပြသနာမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီအသင်းမှာပျော်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် မိသားစုကလည်း ဒီမှာပျော်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် စပိန်ကိုမသွားရင်လည်း ဒါကပြသနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကို ချစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကျွန်တော့်ကိုချစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ပျော်မှာပါ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Photo: The Independent , Ultimate Sports Betting
ခယျြလျဆီးမှာပဲ ကစားသမားဘဝကုနျဆုံးဖို့ရှိတယျလို့ ပွောလိုကျတဲ့ ဟာဇကျ Hazard
လကျရှိမှာ အကောငျးဆုံးပုံစံရနတေဲ့ ဟာဇကျ Hazard နဲ့ ရီးယဲလျအသငျးတို့ရဲ့အသငျးတှဟော အဆကျမပွတျထှကျပျေါနတောပါ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာလညျး ဟာဇကျကို ချေါယူဖို့အသညျးအသနျဖွဈနသေလို ဟာဇကျကိုယျတိုငျကလညျး ရီးယဲလျအသငျးကို ပွောငျးရှခေ့ငျြနသေူပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျရှိမှာတော့ ဟာဇကျက ခယျြလျဆီးပရိသတျတှေ စိတျကနြေပျစမေယျ့ စကားကိုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဟာဇကျက ခယျြလျဆီးမှာပဲ ကစားသမားဘဝကုနျဆုံးဖို့ရှိတယျလို့ ပွောခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဟာဇကျ က “ခယျြလျဆီးမှာကစားသမားဘဝ ပွီးဆုံးဖို့ရှိပါတယျ။ ဒါဘာပွသနာမှမရှိပါဘူး။ ကြှနျတျော ဒီအသငျးမှာပြျောနပေါတယျ။ ကြှနျတျော မိသားစုကလညျး ဒီမှာပြျောနပေါတယျ။ ကြှနျတျော စပိနျကိုမသှားရငျလညျး ဒါကပွသနာတဈခုမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောပရိသတျတှကေို ခဈြပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြမယျလို့ထငျပါတယျ။ အနာဂတျမှာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျေျာာ ပြျောမှာပါ ” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
by Naing Linn . 37 mins ago